विवेकशील साझाले बनायो अनिल भेटवाललाई प्रदेश १ को संयोजक
विराटनगर, ११ फागुन । विवेकशील साझा पार्टीले झापाका समाजसेवी तथा उद्यमी अनिल भेटवाललाई प्रदेश नं १ को संयोजक घोषणा गरेको छ ।
शनिबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा भेटवालको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । उनलाई पार्टीको परम्परा अनुसार संयोजक रविन्द्र मिश्रले माटोको टिका लगाएर संयोजक घोषणा गरिएको प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले जानकारी दिए ।
को हुन् भेटवाल ?
सन् १९९० ताका राजनीति गरेर पछि राजनीति त्यागेका भेटवाल सन् १९९५ मा सबैभन्दा कम उमेर (२९ वर्ष) मा नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष बनेका थिए । हाल पनि उनी जेसिसको देशव्यापी प्रशिक्षक हुन् । झण्डै ६ वर्ष सपरिवार अमेरिका बसेर सन् २००८ मा सधैंको लागि नेपाल फिर्ता आएका भेटवाल झापाका एकजना उद्यमी पनि रहेका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै नवनियुक्त प्रदेश संयोजक भेटवालले आफ्नै जीवनकालमा देशको रूपान्तरणको लक्ष्य बोकेर अघि बढ्न लागेको विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वमा संलग्न भएर पार्टी तथा राष्ट्र निर्माणमा होमिन पाएकोमा अत्यन्तै खुशी र उत्साहित भएको बताए ।